लकडाउनको आज ६१ औं दिन, के छ अवस्था ? | Kendrabindu Nepal Online News
6384205 377797 3085455 2920953
लकडाउनको आज ६१ औं दिन, के छ अवस्था ?
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १७:३२
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण न्यूनिकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज ६१ औं दिन पुगेको छ ।
गत चैत ११ गतेबाट जारी गरिएको लकडाउन पटक पटक समय थप गर्दै जेठ २० गतेसम्म पु¥याइएको छ । लकडाउनपछि अत्यावश्यक सेवाका सवारी र पासबाहक सवारी सञ्चालनमा रहेपनि भित्रि सडकहरु सुनसान जस्तै देखिएका छन् ।
अत्यावश्यक सवारीहरु भित्रि सडकमा पनि गुडेका छन् तर न्यून मात्रामा । चोक चोकमा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचमा कडाई गरेको छ । उपत्यकाको भित्रि क्षेत्रमा रहेका प्रायः सटरहरु बन्द रहेका छन् । विहान र बेलुकीको निश्चित समयमा खाद्यान्न र तरकारी पसल सञ्चालनमा रहेपनि दिउँसो समयमा भने पूर्णरुपमा बन्द छन् । पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले उपत्यकामा कडाई गरेको छ । पास वितरणमा कडाई गर्नुका साथै उपत्यका छिर्ने सवारीसाधन र व्यक्तिहरुको चेकजाँचमा पनि कडाई गरेको छ । उपत्यकामा पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सतर्कता बढाउन सरकारले सम्पूर्णमा आग्रह गरेको छ । भित्रि गल्लीहरुमा स्थानीयहरुले नै अपरिचित व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरेका छन् ।
साँझपखको समयमा उपत्यका पूर्ण सुनसान देखिन्छ । केही ठाउँमा सडकबत्ति र होडिङ बोर्डहरु बलेको देखिएपनि सडकमा प्रायः गाडी देखिँदैनन् । अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन र सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन बढी देखिन्छन । रातिको समयमा पनि ट्राफिक प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरुले सुरक्षा जाँचलाई पनि निरन्तरता दिएको पाइएको छ ।
सरकारले चैत ११ गते पहिलो पटक एक साताका लागि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि एक साता समय थप गर्दै चैत २५ गतेसम्म लकडाउन गरियो । त्यसपछि तेस्रो पटक मिति थप्दै वैशाख ३ गतेसम्म लम्बिएको लकडाउनलाई चौथो पटक १२ दिन थपेर वैशाख १५ गतेसम्म पु¥याइयो । त्यसपछि पुनः १० दिनका लागि लकडाउन थप भएर बैशाख २५ सम्म पुग्यो र सरकारले छैटौँ पटक जेठ ५ गतेसम्म लकडाउनको अवधि थप्यो । संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि सरकारले जेठ २० गतेसम्म पुनः लकडाउनको अवधि बढाएको छ ।
covid19, लकडाउनको आज ६१ औं दिन
Prevनेपालका ४१ जिल्लामा कोरोना संक्रमित, कुन प्रदेशमा कति ?
कराँची जेलमा तीन सय जना काेराेना सङ्क्रमितNext
पर्वतमा पहिलो पटक पाँच जनामा कोरोना संक्रमण : गण्डकी प्रदेशमा संक्रमित संख्या ३७ पुग्यो
फेरि चक्रवातः नेपालमा कस्तो पर्छ प्रभाव ?
करदातालाई कर तिर्न सरकारको ताकेता, समयमै बुझाएमा जरिवाना नलाग्ने